Yetatu Maindasitiri Shanduko: Chii icho, zvigadzirwa zvayo uye zvakatanga riini | Ehupfumi Zvemari
Chechitatu chimurenga maindasitiri
Claudi Casals | | General hupfumi
Sezvo vazhinji vedu tatoziva, nhoroondo inoratidzirwa nezviitiko zvakasiyana zvinomiririra shanduko munharaunda zhinji dzevanhu, tsika, hupfumi uye tekinoroji. Shanduko yeindasitiri, semuenzaniso, ndeimwe yeanozivikanwa kwazvo. Kuunzwa kwemuchina unorema wakagadzirirwa kugadzirwa kwakawanda, mafekitori uye injini yemhepo ndizvo zvinhu zvekutanga zvinouya mupfungwa. Zvisinei, Hwechitatu hwemaindasitiri ekumisikidza akaonekwa, imwe neimwe iine yayo tekinoroji, yezvivakwa uye musika shanduko. Muchokwadi, iyo yechitatu indasitiri shanduko haisati yasvika kumagumo.
Muchikamu chino isu tichataura nezve iyo yechitatu maindasitiri shanduko, paakatanga uye neshanduko yaakonzera. Pasina kupokana inyaya inonakidza kwazvo uye Zviri nyore kuti uzvizivise iwe kuti unzwisise zviri nani musika uye musika wemasheya.
1 Ndeipi yechitatu indasitiri shanduko?
1.1 Ndeapi matanho akakosha ekuvandudza kwechitatu kwemaindasitiri?
2 Shanduko yechitatu mumaindasitiri yakaitika riini?
3 Kudyidzana kwenyika
Ndeipi yechitatu indasitiri shanduko?
Iyo inozivikanwa zvakare seyambiro yekuchenjera (RCT) kana yechitatu yesainzi-tekinoroji shanduko, yechitatu indasitiri shanduko inomiririra pfungwa yakatenderwa neParamende yeEurope munaJune 2007. Iko shanduko yezvehupfumi mune iyo nyowani masisitimu emagetsi anosangana nehunyanzvi hwekutaurirana matekinoroji.
Idzi nzira nyowani dzekutaurirana dzinopedzisira dzave nzira dze manejimendi uye kuronga uko budiriro dzakaita kuti zvikwanisike nekuda kwenzvimbo nyowani dzesimba. Mune ino kesi isu tiri kutaura nezvayo roorano iri pakati peinternet yekutaurisa tekinoroji uye simba rinowedzerwazve rezana ramakumi maviri nemasere, iyo inomutsa kunonzi kunonzi kwechitatu kwemaindasitiri echimurenga.
Ndeapi matanho akakosha ekuvandudza kwechitatu kwemaindasitiri?
Kune zvakawanda zvakagadzirwa izvo zvakabuda kubva kune yechitatu indasitiri shanduko, izvo zvinobva zvagadzira zvimwe zvigadzirwa, mazano uye matekinoroji akagadzirwa. Iko kutenderera kusingaperi uko kuwanikwa kwega kwega kunotungamira kuzviuru zvimwe. Iko kumhanya kuri kukura munhu kuri kutyisa. Pakati pezvakawanda zvakagadzirwa zvechitatu maindasitiri shanduko izvi zvitatu zvinonyanya kumira zvakanyanya:
Fiber optics: Icho chinongedzo chekutapudza chinowanzo shandiswa mu data network.
Washington City Offices: Icho chinyorwa chinoshandiswa zvakanyanya nhasi mune akasiyana maindasitiri zvigadzirwa.
Kutenda kune izvi zvigadzirwa uye zvishandiso, akawanda akakosha emagetsi zvigadzirwa zvakagadzirwa. izvo zviri chikamu chedu chezuva nezuva. Uye kwete izvo chete, asi pese pese patinokwanisa kutakura nekufambisa dhata nenzira inokurumidza uye inoshanda. Kunyangwe kuchengetwa kwayo kunoitwa mumidziyo midiki uye midiki.
Shanduko yechitatu mumaindasitiri yakaitika riini?
Sezvaunogona kutarisira, pakanga paine shanduko dzeindasitiri chikamu chechitatu chisati chaitika. Munguva yekutanga, musika wechisikigo yaive mhuri hombe uye zvese zvavanoda. Saka, hwaro hwebudiriro bhizinesi kwaive serial kugadzirwa. Ndokureva kuti: Makuru vhoriyamu zvigadzirwa zvine yakaderedzwa dzakasiyana. Ngatione imwe data rakakosha kubva panguva ino:
Makore: 1760 ine 1870.
Inotungamira nyika: England
Mamiriro ezvinhu: Navigation uye migero.
Hunhu matekinoroji: Mashini maturu, machira michina uye zvese zvinogoneka nekuda kweinjini dzemhepo.
Nzvimbo yehupfumi: Bhizinesi diki nepakati.
Zvino kwakauya shanduko yechipiri yekumaindasitiri. Mariri, pfungwa yemhuri yakachinja uye masangano akaona mhuri yenyukireya semusika wavo chaiwo. Iyi ndiyo data yekusimbisa:
Makore: 1870 ine 1970.
Inotungamira nyika: United States
Mamiriro ezvinhu: Steamboats, materegirafu, nhare, uye chitima.
Hunhu matekinoroji: Injini yekupisa, kemikari chigadzirwa kuvandudza uye michina yemagetsi.
Bhizinesi diki nepakati rinova mune chinhu chekutsigira chemakambani makuru.
Chekupedzisira pane yechitatu yekuvandudza kwemaindasitiri. Muzera rino, pfungwa yekutarisisa ndeyeiye, kugadzira musika wechisikigo wakakamurwa kwazvo uye wakasarudzika. Mabhizinesi anopa akasiyana akasiyana ese zvigadzirwa uye masevhisi, uye zvigadzirwa zvekugadzira zvidiki kwazvo. Pano isu tine akakosha maitiro.
Yakatanga muna 1970.
Nyika dzinotungamira: Japan, United States uye nyika dzeEurope.
Mamiriro ezvinhu: Masisitimu ekufambisa mazhinji, kufona uye netiweki.
Hunhu matekinoroji: Ruzivo rwetekinoroji, manejimendi eruzivo uye kukura kwema microelectronics nemakambani ebasa.
Mabhizimusi madiki nepakati nepakati akakosha kuti masisitimu ese ashande.
Kudyidzana kwenyika dzepasi pose kwakakosha mukuchinja kwechitatu kwemaindasitiri. Kutenda kumatekinoroji matsva, musika wavhura munhu wese kuburikidza nemambure asina miganhu yenzvimbo. Nekuuya kweinternet, zvipingamupinyi hazvisisipo uye vanhu vanokwanisa kusvetuka kubva kuhunhu hwenharaunda kana hwenharaunda kuenda kune yakasarudzika kana yepasi rose.
Zvakare chivimbiso chemabasa matsva chiri kuzadzikiswa nekuda kweiyo dhijitari zera. Basa raJobho rinogoneswa nekubuda kwemapuratifomu epamhepo akanangana nekubata ma freelancers. Zvisinei, ivowo vanotyisidzira kuvapo kweruoko rwekugadzira oba. Makambani anowedzera uye akawanda anosarudza kugadzirisa mamwe maitiro ekugadzira nepo vashandi vavo vevanhu vachisarudzwa mune mamwe mabasa ehungwaru. Naizvozvo, nepo ichigadzira mabasa matsva kune rumwe rutivi, inoparadza mabasa ekare kune rimwe divi.
Yemberi mhedzisiro yemarobhoti uye matsva matekinoroji pane basa
Iko shanduko dzinoshanda pane yechitatu indasitiri shanduko inofanirwa kufambira mberi nekukurumidza. Kana mumwe akasara kumashure, vamwe vese vanozobatwa. Imwe yematambudziko akakurisa kutsakatika kwemabasa mazhinji, semabatirwo ari kuitwa vanhu nedambudziko rekushaikwa kwemabasa. Zvichava zvakaoma kwazvo kuti nzanga dzese dziite shanduko kubva kune yemhando yezvehupfumi yanga ichiitika kwemakore akawanda kudaro.
Pachine kusahadzika kwakawanda maererano neshanduko dziri kuoneka kutenderera pasirese. Nyika yega yega inofanirwa kuzvirongedza kuti isazosiiwa kumashure padanho rehunyanzvi, asi kuchine vakawanda vanogadzirisa matambudziko akamuka mazana emakore apfuura. Aya mamiriro ari kunetsekana sezvo achigona kuwedzera kusaenzana. Nyika yemunhu inofanirwa kutarisisa kugadzirisa matambudziko ese ayo aine chokwadi chikuru achauya neyechitatu maindasitiri echimurenga.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » General hupfumi » Chechitatu chimurenga maindasitiri
Marcelino Romas akadaro
Ndakavhura kambani yekumahombekombe muPanama uye neiyi nzira ndakakwanisa kuchengetedza mari yangu munzvimbo iyoyo yemutero. Ndiri kufara zvikuru nekubudirira kwehomwe yangu yechimbichimbi, pasina mari yangu kudzikiswa.
Pindura Marcelino Romas
Kumbira imwechete kana vaviri vaviri mogeji?